Men – စာမကျြနှာ2– Healthy Life Journal
နားတစ်ဖက် မကြားရတော့လို့ပါ (Hearing Problem)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ သမီးက အသက်၂၄နှစ်ပါ။ နားတစ်ဖက် မကြားရတော့လို့ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လ လောက်တုန်းက ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အလုပ်မှာတနေ့လုံး အကောင်းပါ။ ညကျတာ့ ရင်ဘက်အောင့်တယ်ဆိုပြီး အိပ်ပြန်ပါတယ်။ မနက်လည်းထရော ဘယ်လိုမှ ထလို့မရတော့ပါဘူး။ တစ်ဖက်မှတစ်ဖက်သို့လည်း စောင်းလို့မရတော့ပါဘူး။ ဆရာဝန်ခေါ်ပြီး အိမ်မှာပြပါတယ်။...
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) ခေါင်းလောင်းနှိပ်သံကြားလို့ တံခါးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ စာရေးသူရဲ့ မိတ်ဆွေကိုတာကို တွေ့ရတယ်။ “ ဘယ်ကနေ ဘယ်လို ခြေဦးလှည့်လာတာလဲ” “ ကြုံလို့ဝင်လာတာပါ။ မိုးခိုရင်း စကားပြောချင်လို့” “ အတော်ပဲ။ မိုးတစိမ့်စိမ့်ရွာနေလို့ အပျင်းပြေ...
ပခုံးအဆစ်ပြုတ်သွားခြင်း (Dislocation Shoulder)
ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးခွဲစိတ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး. အဆစ်ပြုတ်သွားတဲ့အကြောင်း သိပါရစေ ဆရာ။ ဖြေ. အဆစ်ပြုတ်တယ်ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရှိသမျှ အဆစ်တွေ အကုန်လုံးက ပြုတ်နိုင်တဲ့ အဆစ်တွေပါပဲ။ သိပ်ခိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ တင်ပါးဆုံအဆစ်တွေလည်း ပြုတ်နိုင်ပါတယ်။ လည်ပင်းရိုးနဲ့ ခါးရိုးအဆစ်တွေလည်း ပြုတ်နိုင်တာတွေ၊...
ယခင်တစ်ပတ်မှအဆက် ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဆီးချိုဆေးတွေကို အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအတွက် အသုံးပြုနိုင်မလား အရင်က အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအတွက် ဆေးမျိုးစုံ ရှာဖွေခဲ့ကြပေမယ့်လည်း ထိရောက်တဲ့ဆေး မတွေ့ခဲ့ကြသေးပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆေးတွေဖော်ထုတ်ရာမှာ အမိုင်းလွိုက်ဒ်ပလပခ် (Amyloid plaque) တွေ လျော့နိုင်စေတဲ့ဆေးကိုသာ ရှာဖွေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါရဲ့...
ကားမှန်အပြင်ဘက်သို့ လက်ထုတ်စီးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရသော ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ
Q. ကားစီးတဲ့အခါ လက်တွေ၊ ခြေထောက်တွေ အပြင်ထုတ်စီးတာကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်တွေကို ပြောပြပေးပါ ဆရာ။ ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း အရိုးခွဲစိတ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း A. ကားစီးရင် ကားမှန်တွေကို ပိတ်ထားသင့်ပါတယ်။ ကားမှန်ဖွင့်ထားရင်လည်း လက်ထုတ်တာ၊ ခေါင်းထွက်တာမျိုး မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ တစ်ခါကြုံဖူးတာဆိုရင် လူကအိပ်ငိုက်ပြီး...
နားထဲ အသံကြားခြင်းအတွက် စိတ်ကုထုံး(၂)
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) စိတ်ကျန်းမာရေး ဘွဲ့လွန်သင်တန်းဆရာဝန် ဒေါက်တာပီတာနဲ့ “အကြောင်းမဲ့ နားထဲမှာ စကားပြောသံကြားခြင်း” AVH အတွက် စိတ်ကုထုံးကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးနေပါတယ်။ “စိတ်အာရုံပြောင်းလဲနည်း” Aကုထုံးကို ပြောပြီးပါပြီ။ အခုစကားပြောသံကို အာရုံစိုက်ကုသနည်း (Focusing) နဲ့...
မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အခြေခံအားဖြင့် လူတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံကို သုံးမျိုးခွဲခြားထားပြီး လူတွေမှာ အဲဒီခန္ဓာကိုယ်ပုံစံ သုံးမျိုးအနက် တစ်မျိုးနဲ့ အကျုံးဝင်နေတတ်ပါတယ်။ ၀ပြီး လုံးဝိုင်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် (Endormorph)၊ မပိန်မ၀ အနေတော်ခန္ဓာကိုယ် (Mesomorph)နဲ့ ပိန်ပါးတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်(Ectomorph)ဆိုတဲ့ ပုံစံသုံးမျိုးပါ။ ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်အချိုးအဆစ်တွေက...
ခန္ဓာကိုယ်မှ အချွဲများ အလွန်အကျွံထွက်ရှိနေရခြင်း အကြောင်းရင်းနှင့် ဖြေရှင်းနည်း
စူး (ဆေးဝါတက္ကသိုလ်) လူတိုင်းမှာ အချွဲတွေရှိပြီး အချွဲတွေက ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ချောင်းဆိုးတဲ့အခါ အချွဲတွေက အ၀ါရောင်၊ အစိမ်းရောင်သမ်းနေတာ တွေ့ရတတ်သလို ခန္ဓာကိုယ်ကနေ အချွဲများများထွက်တာက ပြဿနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် အချွဲတွေ အလွန်အကျွံထွက်နေတာလဲ ခန္ဓာကိုယ်ကနေ တစ်ချိန်လုံး အချွဲတွေထွက်နေပြီး မသက်မသာ...
နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် ထိပ်တန်းအစားအစာ ငါးမျိုး
မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) (၁) သစ်ကြားသီး ကောင်းတဲ့ အဆီတွေပါဝင်တာကြောင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အခွံမာသီးဖြစ်ပါတယ်။ (၂) အဆီများသောငါး အဆီများတဲ့ငါးမှာပါတဲ့ အိုမီဂါသရီးဖက်တီးအက်ဆစ်က နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် မရှိမဖြစ်အရေးပါပါတယ်။ (၃) ၀ိုင်နီ ၀ိုင်နီမှာပါတဲ့ ရက်စ်ဗာရထရောဟာ သွေးကြောတွေ ထိခိုက်မှုမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး သွေးတွင်းမကောင်းတဲ့...
ကျောက်ကပ်အတွက် သတိပြုဆင်ခြင်ရမည့် အမူအကျင့် ၉ မျိုး
Healthy Life journal ကျောက်ကပ်က ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက် အခရာကျပါတယ်။ သွေးနီဥထုတ်တာ၊ သွေးဖိအားထိန်းညှိတာ၊ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း သန့်စင်တာ၊ ရေအပိုစွန့်ပစ်တာ၊ သွေးထဲမှာပါတဲ့ မရှိမဖြစ် သတ္တုဓာတ်အဆင့်တွေကိုထိန်းချုပ်တာ စတာတွေ လုပ်ဆောင်တဲ့ ကျောက်ကပ်ဟာ အောက်ပါအမူအကျင့်တွေလုပ်ရင် ထိခိုက်စေနိုင်တာသတိထားပါ။ (၁) ဆီးအောင့်ထားခြင်း ဆီးသွားချင်တာကို...